"Fomba efatra ny manaparitaka" - izany no anaran'ilay foto-kevitry ny varotra vaovao avy amin'ny mpanamboatra fiaramanidina japoney Iwata. Ny orinasa dia mieritreritra ny dingana sarotra, saingy manampy indrindra ho an'ireo vao manomboka, miaraka amin'ity halehiben'ny fiaramanidina ity izay iray azonao atao ny manasokajy ho sariaka ny mpampiasa. Ny tanjona eto dia ny hanomezana ireo olona liana amin'ny fanamory fiaramanidina hijery tsara ny toetra sy ny tombotsoan'ny tsirairay mpiorina amin'ny maherin'ny 30 airbrush, ka hanatsotra ny filàna azy sy ny filan'ny tsirairay. Mety ho fantatrao ireo rafitra mitovy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, izay ie rakitra tennis iray dia tsy hitovy amin'ny refy arakaraka ny haingana sy ny fahatongavan'izy io.
Iwata mpitifitra basy. Araka ny fahasamihafana geometrika amin'ny endrika samihafa amin'ny karazana hoso-doko, ireto fomba manaraka ireto dia matetika ampiasaina amin'ny fametrahana ny basy fanaparitahana Iwata any Japon.
1. fomba fihenjana Mahitsy ny modely fanondrahana. Mihazona ny basy mitifitra amin'ny tànana ankavanana. Manomboka amin'ny sisiny ankavia ankavanan'ny ny mpanazatra, esory ny spanner ankavia miankavia. Manaova dia fitsangatsanganana haingana dia avelao. Amin'ny ankapobeny, ny vovon-tonony dia 1/2, 1/3 ary 1/4, izay azo fehezina arakaraka ny karazana coating. Rehefa vita ny faritra iray dia afafazo ny fandaharana hafa. Araka ny fomba fanao, ny famafazana dia azo atao ihany koa amin'ny lafiny mifanohitra, izany hoe avy amin'ny ilany havanana amin'ny mpandrindra mankany amin'ny ilany ambony.
2. fomba famafazana lava. Ny fomba dia mitovy amin'ny fomba fanodinana mendri-kavana, afa-tsy ny oelin'ny Japoney Iwata spray gun nozzl ho lasa zoro miakatra, ary ny basy mitam-basy dia mihazakazaka avy amin'ny ankavia, ambony na ambony havanana sy aoriana. Azonao atao ihany koa ny mihodina miverina miankavia sy miankavia miankavia.
3. fomba fiasa mitsangana sy mitsivalana. Rehefa manondraka izy dia afafazo miverimberina mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa manapotsitra fanindroany dia miverimberina miverina miverina. Ovay ny fizotry ny sary isaky ny mandeha.